Tele relay သည်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် Joe Biden ၏အောင်ပွဲအပေါ်Véronique Genest ၏ဒေါသထွက်ခြင်း
အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောဂျိုးဘိုင်ဒန်၏အောင်ပွဲအပေါ်Véronique Genest ကဒေါသထွက်ခဲ့သည်
ယူအက်စ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင်ဂျိုးဘိုင်ဒန်၏အောင်ပွဲသည်လူတိုင်းကိုမကျေနပ်စေခဲ့ပါ။ တွစ်တာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဝေဖန်ခဲ့သည့်Véronique Genest ၏အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ၏အမျက်ဒေါသဆွဲဆောင်တဲ့ထုတ်ဝေ။
ရက်ပေါင်းများစွာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပြီးနောက်ဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်၊ စနေနေ့တွင်အိမ်ဖြူတော်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ၂၁၄ ကိုဆန့်ကျင်။ မဲဆန္ဒရှင် ၂၉၀ ကိုရယူခြင်းအားဖြင့် Donald Trump ၏လက်မှရယူခဲ့သောအောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် Jill Biden ၏ခင်ပွန်း၏အောင်ပွဲသည်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများစွာကိုနှစ်ခြိုက်ခဲ့သည်။ ဤပျော်ရွှင်မှုကိုဆင်နွှဲရန် ၀ ါရှင်တန်နှင့်နယူးယောက်တို့ကဲ့သို့သောမြို့ကြီးများ၏လမ်းများကိုသူတို့ကျူးကျော်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကြယ်များတွင်မူသူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်စာပေများဖြင့်လူမှုကွန်ယက်များကိုပြည့်နှက်စေသည်။ Nolwenn Leroy, Lady Gaga, Shakira နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့ပင်။
သူမအနေဖြင့်ဟီလာရီကလင်တန်ကဂျိုးဘိုင်ဒန်၏အောင်ပွဲသည်တိုင်းပြည်အတွက်သာမကအမေရိကန်များအတွက်ပါသမိုင်းဝင်နေ့ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်အဆုံးစွန်သောထင်မြင်ချက်တူညီသောအမြင်မဟုတ်ပါ။ အတိအကျဆိုရလျှင်၊ နို ၀ င်ဘာ ၇ ရက်၊ စနေနေ့တွင်တွစ်တာတွင်ဗဲန်နစ်ဂျင်နစ်စ်၏ဝေဟင်မှဝေဒနာခံစားခဲ့ရသည်။
Véronique Genest သည်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများမှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည်
ဂျိုးဘိုင်ဒင်အနိုင်ရပြီးမကြာမီတွင်ဗိုရွန်နစ်ဂျဲနပ်စ်သည်သူမကိုသူမ၏ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မျှဝေလိုခဲ့သည်။ ဂျူလီလက်စကော့ကြယ်ပွင့်သည်တွစ်တာတွင်ဤသို့ရေးသားခဲ့သည် - နောက်ဆုံးတွင်အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲများသည်ငါတို့ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ပို၍ ဆိုးရွားသွားသည့်အဆိုးဆုံးမှထွက်လာသည်။ ဘုရားသခငျသညျအမရေိ "နာကျင်" !!! " သူမကအော်ဟစ်နေတဲ့ငိုသံကိုတောင်ထည့်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့်သူမထုတ်ဝေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုလျစ်လျူရှုခဲ့တာလဲအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေရဲ့ဒေါသကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ဖတ်နိုင်ဘူး "Trump ထက်ပိုဆိုး? ကျနော်တို့မှာအဲဒီအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိဘူး” ဒါမှမဟုတ် « ဂျူလီလက်စ်ကော့တ်အချိန်ကမင်းဟာအေးအေးဆေးဆေးပဲ "။ အမှန်မှာထင်မြင်ချက်များသည်အလွန်ကွဲပြားသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းအားအတူတူပင်အကြောင်းအရာအပေါ်အားလုံးသဘောတူရန်ခက်ခဲသည်။
Oakland စားဖိုမှူး Tanya Holland ၏တီဗီရှိုးတွင် Oprah ကွန်ယက်တွင်လူများပါဝင်လိမ့်မည်
ကိုတိုနိုသည်သူ့ဟာသူအသစ်တီထွင်သည်။ - လူငယ်အာဖရိက